န ~ မြန်မာ့သံစဉ်စာသားများ
နဂါးနီ။ ဆို - ခင်မောင်ရင်။
နဒီမင်္ဂလာ။ ဆို - ခင်ဝမ်း။
နရီပျက်သူ (အရက်သမား)။ ရေး - တောဝက်။ ဆို - ဂျာရစ်။ စီးရီး - ရော့ခ်ယူနိုက်တက် (၂)။
နိမိတ်ပုံ။ ရေး - အငဲ။ ဆို - ၀ိုင်ဝိုင်း။ စီးရီး - လမင်းနဲ့ပင်လယ်။
နှလုံးသားရှိတဲ့အရပ်။ ရေး - ရွှေဂျော်ဂျော်။ ဆို - ဂရေဟမ်။ စီးရီး - လက်ဆောင်။
နှလုံးသားလေးထဲ မွေးဖွားရစေမှာ။ ဆို - L လွန်းဝါ။
နီးနီးလေးနဲ့ဝေး။ ရေး/ဆို - ဟန်ထူးလွင်။ စီးရီး - အားလုံးအတွက် PUNK!
နီးအောင်ပင်လှမ်း။ ရေး - ရွှေတိုင်ညွန့်။ ဆို - မကြည်အောင်။
နား။ ရေး/ဆို - နောနော်။ စီးရီး - ၁၀ စက္ကန့် (၁)။
နားနားပြီးပြော။ ရေး - မောင်မောင်ဇော်လတ်။ ဆို - မျိုးကြီး။ စီးရီး - နိစ္စဓူဝ။
နားလည်ပါ။ ရေး - ဟန်ထူးလွင်။ ဆို - Big Bag ။ စီးရီး - ပန့်ခ်အကြောင်း မပြောနဲ့၊ Big Show In The Bag
နားလည်နိုင်မလား။ ရေး - ဂျူဘယ်လ်။ ဆို - ပိုင်မိုးသက်ကျော်။ စီးရီး - ရော့ခ်ယူနိုက်တက် (၃)။
နေခြည်။ ရေး - မြင့်မြတ်။ ဆို - ဆလိုင်း။ စီးရီး - ရော့ခ်ယူနိုက်တက် (၁)။
နေချင်တာမင်းအနား။ ရေး - ပူစူး၊ ဆို - IMP
နေခဲ့တော့။ ရေး - လင်းလင်း။ ဆို - မျိုးကြီး။ စီးရီး - နိစ္စဓူဝ။
နေရာတကာ။ ရေး - မျိုးမျိုး။ ဆို - အဲလက်စ်။ စီးရီး - စိတ်ကူးသက်သက်များ။
နေ၀င်ချိန်။ ရေး - အယ်လ်ဖြူ။ ဆို - ဘိုဖြူ။ စီးရီး - ပြည့်စုံပါစေ။
နေ၀င်သွားသောဘ၀များ။ ရေး - ဟန်ထူးလွင်။ ဆို - Big Bag ။ စီးရီး - အားလုံးအတွက် PUNK!
နွေရာသီ။ ရေး - စိုင်းခမ်းလိတ်။ ဆို - စိုင်းထီးဆိုင်။ စီးရီး - နွေရာသီ။
နွေဦး။ ရေး - ဟန်ထူးလွင်။ ဆို - Big Bag ။ စီးရီး - ဗီလိန်။
နွေဦးကံ့ကော်။ ရေး - ကိုလေးလွင်။ ဆို - ထူးအိမ်သင်။ စီးရီး - တစ်နေ့စာအလွဲများ။
နွံ။ ရေး - အငဲ။ ဆို - အငဲ။ စီးရီး - ဇစ်မြစ်။
နောက်ကွယ်ရာ။ ရေး - ဆွေဟိန်း။ ဆို - ရှင်ဖုန်း။ စီးရီး - ရင်ခုန်မိသူ။
နောက်တာ။ ရေး/ဆို - ဟန်ထူးလွင်။ စီးရီး - PUNK အကြောင်းမပြောနဲ့။
နောက်ထပ်မရှိ။ ရေး - မြင့်မိုးအောင်။ ဆို - ထူးအိမ်သင်။ စီးရီး - တစ်နေ့စာအလွဲများ။
နင်ရမှာငါတစ်ယောက်တည်း။ ရေး - PLP ။ ဆို - နေမင်း။ စီးရီး - ရော့ခ်ယူနိုက်တက် (၂)။
နင်မချစ်လည်းပဲ ငါချစ်တယ်။ ရေး/ဆို - Cobra ။ စီးရီး -5x2= 1. Vol
နောင်တ။ ရေး/ဆို - ဟန်ထူးလွင်။ စီးရီး - PUNK အကြောင်းမပြောနဲ့။
နှစ်ယောက်တစ်အိပ်မက်။ ရေး - စိုးလင်း။ ဆို - ဂရေဟမ်။ စီးရီး - လက်ဆောင်။
နှစ်ယောက်အတူတို့။ ရေး - အောင်ခိုင်မော်။ ဆို - စိုးလွင်လွင်။ စီးရီး - သူရဲကောင်းတို့ရဲ့ နှလုံးသား။
နိစ္စဓူဝ။ ရေး - လင်းလင်း။ ဆို - မျိုးကြီး။ စီးရီး - နိစ္စဓူဝ။
နတ်မိမယ်မိန်းမလှလေး။ ရေး - မောင်သစ်မင်း။ ဆို - အငဲ။ စီးရီး - အယ်လ်အမ်အင်န်။
နှုတ်ဆက်မယ့်နွေ။ ရေး - ကိုနေ၀င်း။ ဆို - ထူးအိမ်သင်။ စီးရီး - တစ်နေ့စာအလွဲများ။
နယ်ကျွံခြင်း။ ရေး/ဆို - ဟန်ထူးလွင်။ စီးရီး - အားလုံးအတွက် PUNK!
နယ်မြေသစ်များစွာ။ ရေး - မြင့်မိုးအောင်။ ဆို - အငဲ။ စီးရီး - အယ်လ်အမ်အင်န်။